Efa marary mafy ny ankamaroan' ireo olona voan'ny diabeta tsaboina
Pandémie – Nouveau record de contamination
Efa marary mafy ny ankamaroan’ ireo olona voan’ny diabeta tsaboina
Tsy tra-pitsaboana mialoha ny ankamaroan’ny olona voan’ny
diabeta noho ny tsy fahafantarana fa mitondra ny aretina, araka ny fanazavan’ny mpitsabo momba io aretina io, omaly, tetsy amin’ny ivon-toeram-pitsaboana ny aretina diabeta na Amadia, etsy Faravohitra. «Ny tatitry ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na OMS dia 9 hetsy no Malagasy mitondra ny aretina. Ny 36 000 ihany anefa no mbola voatily tato amin’ny Amadia, hatramin’izao. Olana ny tsy fahafantarana ny fitondrana ny aretina ka rehefa tena voa mafy vao manatona mpitsabo ny ankamaroan’ny olona. Tany amin’ny 10 taona lasa izay dia 20 isam-bolana no tapahina tongotra rehefa tena sarotra ny aretina. Amin’izao fotoana izao kosa efa mihena ny isan’ireo tapahina tongotra», hoy Ramamonjisoa Haja, talen’ny fandidiana eo anivon’ny Amadia.
Hisy ny fitiliana io aretina io maimaim-poana, amin’ny alarobia 30 novambra ho avy izao etsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely. Handray anjara amin’ny hetsika ny orinasa mpivarotra fitaovam-pitsaboana Pharmadiff. Olona 1 500 no kendrena ho vita fitiliana amin’ io fanamarihana ny andron’ny diabeta io eto Antananarivo.
Nanamafy ny mpitsabo fa lafo ny fitsaboana ny aretina indrindra rehefa tena miharatsy ny toe-pahasalaman’ily marary. Mahatratra hatrany amin’ny 3 tapitrisa ariary isan-taona ny teti-bidin’ny fanafody sy ny fitiliana maro atao ho an’ireo olona efa marary mafy. Tsy maintsy mitsabo tena mandra-pahafaty anefa ny marary.
Réquisition du LTP Alarobia – Les habitants font part de leur crainte
Changement climatique – Madagascar dans la réduction de GES
Formation – Neuf millions d’euros pour le secteur BTP
Nécrologie – Le représentant adjoint de l’Unicef décédé
Lutte contre la pandémie – Une émission spéciale prévue demain
Prévention des maladies – Les masques jetables, porteurs de virus
Précisions – Le député de Morombe n’a pas été inhumé à Anjanahary
Funérailles – Les derniers honneurs à Emmanuel Rakotovahiny
Hamoaka ny rakikira voalohany i Joëlle Claude
TAOM-PIANARANA 2016-2017 -Nitombo ny mpianatra niditra an-tsekoly
Poles anti-corruption – Les missions de la cour spécialisée défendues
Judo – Qualification JO : Fetra intensifie sa préparation
Fisolokiana :: Kaomiserana polisy migadra eny Antanimora 11 juillet 2020
Fahafatesana tampoka :: Miaramila voatifitry ny basy teny an-tanany 11 juillet 2020
Fifindrana amin’ny rivotra :: Mety ho azo ao anatin’ny efitrano tery ny Covid-19 11 juillet 2020
Fitsaboana ny valanaretina :: Afaka handray marary hatramin’ ny arivo ireo toerana vaovao 11 juillet 2020
Fitsaboana tany an-trano :: Mihatsara ny toe-pahasalaman’ilay mpilomano voan’ny Covid-19 11 juillet 2020